'Umceli mngeni': Ileta evela kuFessy - Tv
'Umceli mngeni': Ileta evela kuFessy
Ubhubhane wehlabathi uvale zonke iindlela zobomi obuqhelekileyo. Kodwa iiMTV Umceli mngeni iyeka ilize. Yintoni-ubucinga ukuba bangathatha ikhefu? I-NBA ibuyile, i-NFL ibuyile, i-NHL ibuyile, i-MLB ibuyile-kwakutheni ukuze umdlalo wesihlanu waseMelika ungafumani ndlela yokukhuphisana? Kule nyanga iphelileyo kaSeptemba, imveliso iye yatshona eReykjavik, eIceland, ukuqala ukufota i-36th (!!) Umceli mngeni . Bakwiqamza labo-nangona kunjalo, kufanelekile ukuba uqaphele, ababanjelwa phantsi komhlaba njengakwisizini ephelileyo-kwaye bakulungele ukubulalana ngesigidi seedola. Kwaye sikulungele ukubhala uxwebhu umzuzu ngamnye: ukusuka kumandla amandla ukuya kwizigqibo ezimbi, ukusuka kubabhontsi bokulwa ebusuku ukuya kwi-dope shit engaqhelekanga TJ Lavin ayenzayo.
Ngoku Olu Luthando Lokwenene
Ngaphambi koku, kwabakho ukulandelelana okwandisiweyo kukaKam noLoyoy bebanga uthando lwabo omnye komnye kunye nokuthanda kwabo ngokubanzi ngokuba ngumphefumlo omnye komnye. Bancamisana ebhafini eshushu ngelixa i-Bangles 'Eternal Flame idlala ngasemva. Kodwa andikhathali-uKam wenza uLeroy i-PB & J ngo-5: 30 ekuseni ngaphambi komceli mngeni kwaye ebuza ukuba uyafuna na ukuba asike ii-crust ngokulula lelona xesha lothando kwesi siqendu. Kuyikaka ngolu hlobo ekwazisa ukuba umfumene iqabane lakho ebomini.
U-Amber B, uphulukene neMathematics
Kumaxesha akutshanje e Umceli mngeni , ezinye zeephazili ziyinyani nje elula yeengxaki ze-algebra. Ndicinga ukuba ngaxa lithile abavelisi babefana, Kutheni sisebenza nzima kangaka ukuza nezi phazili? Aba bantu mhlawumbi abayikhumbuli ne-PEMDAS. Kwaye, boy, babenyanisile malunga naloo nto: Kule ngxaki yemihla ngemihla yale veki, u-Amber akatshatyalaliswanga ngumyalelo wokusebenza, unqunyulwe ngengxaki yokuphindaphinda:
Le iphazili yokuqala yomceli mngeni; U-Amber akafumani thuba lokuzama ezinye iiphazili, kuba akakwazi ukusombulula le. Amanani ayisiyonto yam, utsho ngelinye ixesha, ukujongwa phantsi kwenkulungwane.
Ngoku, ndizibekele ixesha lokuzama ukusombulula le ngxaki-kwaye nangona ndifumene impendulo engeyiyo kwitrayi yokuqala, isandithathe kuphela imizuzu emibini ukuyifumana (impendulo ngu-6,496, ngendlela). UAmber uchitha kungcono iyure koku ngaphambi kokuphosa itawuli ekugqibeleni. Umboniso olusizi kakhulu, kubo bobabini kunye nenkqubo yesikolo saseMelika.
elona xesha lililo lehlabathi
Ngokucacileyo wayephantsi koxinzelelo, kwaye wayesandula ukugqiba umgama oziikhilomitha ezintlanu kumaqondo obushushu abandayo, kodwa yiza-le yinto yenqanaba lesithathu. Kwaye ndiyazi ukuba sonke sinee-iPhones ngoku kwaye khange sicinge ngokubhala ingxaki yezibalo kumashumi eminyaka, kodwa ukuba uyaqhubeka Umceli mngeni Kuya kufuneka uyazi ukuphinda-phinda. Kufuneka nje. Awunakho ukuzivumela ukuba ungafaneleki kuba khange ukhuphe oonotsheluza bezibalo okwethutyana.
Nje ukuba uKam noCory baphumelele umceli mngeni wemihla ngemihla, kuyacaca ukuba indlu izakukhetha phakathi kokuthumela uLoyoy okanye uFessy eCrater. (UKyle wayehlala engena.) Akukho mntu ufuna uLeroy ukuba angene (kuba uyathandeka), ke wonke umntu ujikisa ingqalelo yokufumana uFessy ukuba angene (kuba akathandeki). Kukho iyelenqe kunye nokukhala kunye nokulila, njengoko uFessy emi umhlaba wakhe kwaye ebalekela ukuzifaka; UFessy ubanga ukuba ngoyena mntu unamandla, ongoyikiyo endlwini, nokuba isenzo sakhe sibonisa okuchaseneyo ngqo.
UCory ngulowo ekugqibeleni uqinisekisa uFessy ukuba azikhethele, ngobuchule ebhenela kwi-ego yakhe kwaye emxelela ukuba uyakuthathwa njenge-legend ukuba uthatha lomngcipheko. Njengokuqala kwengxoxo yendlu, uFessy ubhengeza ukuba unento afuna ukuyithetha-kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela, ubeke iingcinga zakhe ifom yeleta .
Nantsi into ekhutshelweyo:
Ndifuna nje ukuba ndikonwabele ngokwenyani ukwazi ngamnye kuni. Lo mdlalo uthetha yonke into kum kwaye ndingaphaya kombulelo kuba ndikwazile ukuyifumana nani nonke. Ndiyazi ngamanye amaxesha ndinokubona ngathi ndinekratshi kwaye ndizithemba kakhulu kodwa andicingi ukuba ndingcono kunaye nabani na. Ndifuna nje ukukhuphisana. Ndijonge kuni nonke kweli gumbi kwaye nilwele ukufana nani ngenye imini. Uninzi lomdlalo luphumile kulawulo lwam kwaye ndiziva ngathi inye into endinokuyilawula kukuthatha lo mdlalo ezandleni zam, ngokunokwenzeka uye kupheliso ngokuhlwanje. Ukuphumelela okanye ukulahleka, ndiyakwazi ukubamba intloko yam phezulu. Ndiyazi nokuba ngubani na endizokulwa naye ngobu busuku, uKyle okanye uLoyoy, iya kuba yinto yokulwa inja, kwaye ndonwabile ngokuchasene nelinye lamabali. U-Amber B, oku akunanto yakwenza nawe. Ndingathanda ngaphezulu kuka-OK ukuqhuba umdlalo wokugqibela nawe. Yinto endiziva ukuba kufuneka ndizenzele yona.
Ke, masibale ubuxoki apha:
Ndiyonwabile ngokwenyani yokwazi omnye nomnye wenu. (UFessy akonwabeli mntu ngaphandle kwakhe.)
Andicingi ukuba ndingcono kunaye nabani na. (Fessy ngokuqinisekileyo ucinga ukuba ungcono kunaye wonke umntu.)
Ndijonge kuni nonke kweli gumbi kwaye nilwele ukufana nani ngenye imini. (Bona: iinombolo 1 no-2.)
U-Amber B, oku akunanto yakwenza nawe. (UFessy uchithe lonke ixesha ekhalaza ngo-Amber; wayelila ngayo.)
Ndingathanda ngaphezulu kuka-OK ukuqhuba umdlalo wokugqibela nawe. (Kwakhona, wayenjalo ngokusisiseko elila ngayo. )
Kwaye ngoku makhe sijonge indlela abasabela ngayo abanye abantu kule ntetho:
Kuyamangalisa ngenene ukuba uFessy uzidubule ngokukhawuleza njani iindlela zokuzonda ngeli xesha lonyaka. Ukuzikhukhumeza kwakhe-apho ahlala khona echaza ukuba ungangenisi, kuba kubonakala ukuba akayazi ukuba lithetha ntoni elo gama-iyamangalisa. Inqanaba lakhe lokungahloniphi abanye abantu, ngakumbi ngasemva kwabo, liyothusa. Ukukwazi kwakhe ukwenza izinto ngendlela eyenza ukuba isikhumba sakho sikhase akunakuthelekiswa nanto. Ukufunda le ntetho ixhasa kakhulu-kwakhona, yena uthathe ixesha ukubhala oku kwaye le yeyona nto ibalaseleyo anokuza nayo- yicherry ephezulu nje yokubaleka okumangalisayo njengoMfo Oyithiyileyo Uninzi. Ndinqwenela ukuba angakhelwanga ngokungathi kukuqina kweNFL.
U-alec baldwin uhlala evala
Abanye abaNtu abaBini abaFundayo
Kuyamangalisa ukuba kwixesha elibiziweyo Iiarhente eziBini , akukho nenye into enomthunzi eyekile. Akukho mntu unqumle umntu ngenene-umntu wonke ufike nje kwisivumelwano soxolo kwaye wahamba malunga neshishini lakhe. Ndiye ndavuya kakhulu ukubona ezinye zeenzame kunye nokujongana namagumbi angasemva ngoLwesithathu ebusuku.
Ndikunye noKam noCory emandleni njengoko iiarhente eziphindiweyo kunye noLoyoy noKyle bezama ngamandla ukuphuma ekuphelisweni, isivumelwano senziwe: Ukuba uKyle uyavuma ukuvota uFessy njengevoti yendlu, uLoyoy uza kwenza uKam, intombi yakhe ukuba ikhethe iqabane lakhe , UCory, ukuba abe yivoti yeearhente ezimbini. Oku, ngokuqinisekileyo, kuya kubangela isiphithiphithi, njengoko ngokuqinisekileyo uCory ebengayi kufuna ukuvota ngokwakhe-ngaloo ndlela emisela imeko apho i-TJ yayiza kunyanzela iiarhente eziphindiweyo, uKam noCory, ukuba beze nje eCrater.
Ukuyibeka kancinci, yile Imanzi njengesihogo . Isicwangciso asizukuphanga kuphela Ubhuti omkhulu Umdibaniso wamandla abo, kodwa iya kuba njalo ngokupheleleyo Cory engaboniyo, kwinto ngokuqinisekileyo enokuba yenye yezona zinto zingalindelekanga, ezona zinobuzaza Umngeni imbali. I was phantse giddy watching Leroy and Nany hatch this plan in the unice hours of-this kind of maneuging and back-stabbing that defining the best Umceli mngeni , Kwaye kanye uhlobo lokuceba oko Iiarhente eziBini ibilahlekile.
Ewe kunjalo, ngenxa yokuba emosha YONKE INTO, uFessy uyasilahla ngokupheleleyo isidingo sesi sicwangciso xa etyumba ukuba aphelise. NgoLoyoy engasafuneki ukuba asindiswe, uKam uyangqinelana nesithembiso sakhe kuKyle aze amphose eCory. (Ngokuqinisekileyo ukuhamba okukhuselekileyo-ukuphosa uCory kuyo bekuya kuba zasendle U-Kyle uthi uziva ephukile entliziyweni kwaye engcatshwe ngu-Kam no-Leroy, kwaye ngelixa ndiqonda ukuba unetyiwa, inyani ebuhlungu yeyokuba imigaqo yokuzibandakanya itshintshile xa uFessy efunda loo leta isisidenge, esisidenge.
UKyle uphuma njengoyise ekugqibeleni, ngelishwa. (NdiyiNtloko kaKyle kwaye andikhathali nokuba ngubani owaziyo.) UFessy-ngubani kwakhona, owakhiwe ngathi sisiphelo esiqinileyo seNFL-ngokuqinisekileyo zilori kuye kumjikelo wokuqala weHolo Brawl, kwaye xa evuka ejikeleza ezibini, uyaqonda ukuba omnye weminwe yakhe WENZEKA KAKHULU:
Uthathwa njengezonyango ukuba akakulungelanga ukukhuphisana, kunye nexesha lakhe Umceli mngeni iphela. Khawufane ucinge: Ukuba uFessy ebengakhange aqiniseke ukuba ubhale loo leta, ngesele sibone omnye weminqamlezo engcolileyo ephindiweyo, kwaye uKyle usenokuba use-Iceland ekhuphisana nesigidi seedola.
Inkqubo ye- Iiarhente eziBini Usetyenziso lwamandla: Iveki ye-17
Emva kwesiqendu ngasinye, siza kugqiba abadlali abakwiindawo ezilungileyo zokuphumelela zonke-kwaye abo baxhonywe ngentambo.
dildo kwicandelo le-nfl
1.UKam noCory: Njengokuza kokugqibela kwiveki ezayo, amaqela ayamangalisa. Akukho nto yahlulahlula eyona ilungileyo kokubi. Kodwa uKam noCory baqinisekisile kwesi siqendu ukuba kutheni benezona mpawu zintle zokuphumelela.
2. UKaycee noFessy: Andizukubangela ukuba Ubhuti omkhulu Iqela-ithemba likaFessy lokusasazeka ngokugqibeleleyo kumdlalo wokugqibela kwakhona uswiti kakhulu-kodwa uKaycee noFessy banemidlalo eninzi kwaye bomelele kwicala labo. Ndiyathemba ukuba bayazazi iitafile zamaxesha abo.
3. UNany noLoyoy: Emva kokulawula ngokupheleleyo eli xesha lonyaka kunye noLoyoy ecaleni kwakhe, uKaycee wayevuya ngaphezu kokuba emtyumbele Ubhuti omkhulu mfondini. Ndiyathemba ukuba uLeroy ekugqibeleni uyakuqonda okwenzekayo xa uthemba abantu abavela kulo mboniso. Kodwa ndiyathemba ukuba ezi zimbini ziya kuphumelela-zabo Ilizwe lokwenene: Las Vegas ixesha liphantsi kakhulu.
4. Amber B. kunye ne-CT: Ukuba obu budlelwane babambelela kumdlalo wokugqibela, akukho mbuzo wokuba i-CT inelona khonkco libuthathaka kwicala lakhe. Ubonile okwenzekileyo xa u-Amber B. wayokulwa nomkhosi ongenakuphikwa ongu-MATH, kodwa ngakumbi, nguye yedwa umntu oseleyo ongazange aqhube Umngeni yokugqibela. Ezi zinto zinzima kwaye zinomda wobundlobongela, kwaye ukufikelela nje kuzo kuya kuba nzima kwi-rookie. Oko kwathiwa, awukwazi ukubheja ngokuchasene ne-CT-ungacingi ukuba akazukuthwala ngokoqobo u-Amber ngaphaya komgca wokugqibela.
Ingoma ye-rap kunye neqela lokumatsha
Mbumbulu nfl 2017 uyilo
Ngaba abadlali bayabelana ngesondo
Eddie murphy joe piscopo
UMichael Jordan i-triple streak
Ipholile iflegi emhlabeni
Ingqondo yomntu wonke kwi-albhamu iyavuza